Miel - CITE
Ny Tantely : Vovonam-pikambanana T.I.A.MA.MI (Tantely Imito Alakamisy Mahazoarivo Mitambatra)
Rédigé par Danny RASOAMANANA - 09 mai 2017 -
Misy mpiompy tantely maro eto amin’ny faritra.
· Ireo mpiompy mpanaraka ny fomba fahiny (élévage traditionnelle), izay tsy fantatra mazava ny isany sy ny faritra misy azy ireo fa miely manerana ny faritra. Tsy miditra anaty fikambanana fa miompy araky izay saim-patany any fotsiny. Na ny vokatra vokarin’izy ireo aza tsy misy atontan’isa mazava.
· Misy vovona iray “MAMY” izay any amin’ny faritra atsimo atsinanana no misy azy ao Kominina Kianjadrakefona no foibeny. Tao anaty “plate forme miel” io vovona “MAMY” io, fa ankehitriny dia tsy heno intsony io vovona io, tsy nandrenesana vaovao intsony.
· Misy ny vovona “TIAMAMI” miara-miasa @ CITE ary tahazo tohana nandritry ny Projet OSC niarahana tamin’ny AGRISUD, izay omena antsika ny momba azy.
2. FAMARITANA NY TIAMAMI
> Niorina tamin’ny 2007
> Isan’ny Mpikambana Fototra OPB: 08
> Distrika Fandriana sy Ambositra
· Kominina : 04 – Imito – Alakamisy – Mahazoarivo – Marosoa
> Isan’ny Mpikambana : 96 (Lahy 69 –( Vavy 27)
> Toerana misy azy : Afovoany Atsinanan’ny Faritra Amoron’I Mania
· Manana ny foibe toerana ao Alakamisy Ambohimahazo – 28Km miala ny renivohitry ny faritra no miatsinanana.
> Adiresy mazava : Alakamisy Ambohimahazo – FANDRIANA
· Finday : 033 04 340 33 – 034 01 667 39 – 033 76 883 60
> Mizara vakim-paritra 04 ny fomba fiasa : Vakimparitra Imito – Manandriana – Vohimarina –
Ankaromalaza. Misy ny fivoriana sy fihaonana matetika eo amin’ireo vakiparitra ireo. Eo ny fifanakalozambaovao
3. SEHATR’ASA SAHANINA
Asa ataon’ny vovonana dia miompana be be kokoa :
· Fiompiana tantely
· Mamokatra ranon-tantely
· Mampiofana ireo Mpiompy Tantely
· Mampihitatra ny fiompiana amin’ny Manodidina
· Miaro ny Tontolo iainana @ fambolenkazo (Pépinière kafe).
Misy ihany vokatra hafa toy SAVOKA sy ny “Cire a
Gaufré” fa tsy voafaritra laotra ny tena lanjambokatra amin’io.
> Vokatra ao anatin’ny taona iray : ranon-tantely 15 000liatra na 18,75Taonina no Vokatra ny taona 2016.
Vokatra madio nadalo ireo fitaovana hanan’ny vovonana (Extracteur…)
Figure 1: Fiompiana Tantely
> Ireo Mpiara-miasa aminy:
· Faritra Amoron’I Mania · DRDR · Kominina : OPCI
· Tranoben’ny Tantsaha · SAHABETSILEO - Projet Matoy – Projet Mamafy
· FRDA – FDA · Association LANONA · FENAM – FENAMP
. DSV · CITE · AGRISUD
· T’TELO · Projet AROPA · Ireo Mpisehitra
> Vina ny t@ taona 2017 : Vokatra ho tratrarina ranon-tantely 20 000litatra na 25 Taoanina.
Figure 2: Ireo Mpikambana TIAMAMI
4. Olana eo seha-pamokarana :
Nisy ny aretina “Varoase” nandalo taty amin’ny faritra. Biby kely mamono ny renintanately ao anaty tohotra na vata izy io. Mandoza tokoa satria rehefa maty ny renitantely dia tsy misy vokatra azo raisina. Voasoroka amin’ny ampahany ihany ny aretina amin’izao fotoana izao. Ampahany ihany, noho ireo mpiompy tsy ao anaty Fikambanana dia sarotra ny fifehezana ny aretina.
Nisy ihany koa ny olana eo amin’ny tontolo hiainana, fahasimbany ireo voly mamony nohon’ ny tsy fahampiany orana, eo ny dorontanety…
Teny filamatra : “Tantely madio, mamy, mahasalama manaraka ny fenitrin’ny fiompiana takian’ny mpanjifa
MADIO, MAMY, MORA !!!!”
Classé dans : PROCOM, Miel